कक्षा ११ र १२ को परीक्षा भोलिदेखि
काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्ष कक्षा १२ को परीक्षाको सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको छ । सोमबारदेखि देशभर एकैसाथ शुरु हुने परीक्षाको सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको बोर्डका अध्यक्ष डा.महाश्रम शर्...
hamrakura.com . ७ मिनेट अघि पूरा समाचार पढनुहोस
जाेमसाेम टावरसँग घोडेपानीमा अन्तिम सम्पर्क, यहाँ हरायाे तारा एयरको विमान
काठमाडौं । आइतबार बिहान ९ बजेर ५५ मिनेटमा पोखराबाट जोमसोङका लागि उडेको तारा एयरको विमान म्याग्दीको शिख क्षेत्रबाट सम्पर्कविहीन भएको छ । १९ यात्रु र ३ जना चालक दलका सदस्य गरी २२ जना सवार विमान म्य...
hamrakura.com . २३ मिनेट अघि पूरा समाचार पढनुहोस
सम्पर्कविहीन जहाज खोज्न समस्या, मौसममा खराबी, हेलिकप्टर रित्तै फर्कियो
बाग्लुङ । पोखरादेखि मुस्ताङ जाने क्रममा सम्पर्कविहीन भएको तारा एयरको ट्विनअटर जहाज खोज्न परिचालन गरिएको फिस्टेल एयरको हेलिकप्टर प्रतिकूल मौसमका कारण जोमसोम फर्किएको छ । मौसम खुल्दासाथ खोजीकार्यका...
hamrakura.com . १ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
तारा एयरको सम्पर्कविहीन जहाजको खोजी तीव्र बनाउन गृहमन्त्रीको निर्देशन
काठामडौं । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले कास्कीको पोखराबाट जोमसोमका लागि उडेको तारा एयरको जहाजको खोजीकार्यमा कुनै कसर बाँकी नराख्न निर्देशन दिएका छन् । कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्य, ...
विमान हराएको लेते क्षेत्रमा बादलले धुम्म, प्रहरीले थाल्याे खोजी
काठमाडौं । पोखराबाट जोमसोङका लागि उडेको तारा एयरको विमान लेते क्षेत्रमा पुगेर सम्पर्कविहीन भएको छ । १९ यात्रु सहित ३ जना चालक दलका सदस्य बोकेको जहाजमा ६ जना विदेशीसमेत रहेका थिए । विमान लेते क्षे...
hamrakura.com . २ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
२२ जना सवार तारा एयरको जहाज अझै सम्पर्कविहीन, हेलिकोप्टरबाट खोजी जारी
काठमाडौं । पोखराबाट जोमसोमका लागि उडेको तारा एयरको जहाज अझै सम्पर्कमा आएको छैन । ९ एन–एईटी कलसाइनको जहाजमा १९ यात्रु तथा चालक दलका तीन सदस्य गरी २२ जना रहेका छन् । जहाजमा १३ नेपाली यात्रु, चार भा...
जम्मू कश्मीरमा दुई हिजबुल मुजाहिद्दीन आतंकवादी मारिए, हतियार र गोला बारुद बरामद
काठमाडौं । जम्मू कश्मीरको अनन्तनाग क्षेत्रमा भएको छोटो भिडन्तको क्रममा दुई हिजबुल मुजाहिद्दीन (एचएम) आतंककारीहरू मारिएको कश्मीर जोन पुलिसले जनाएकाे छ । अनन्तनागको शितीपोरा, बिजबेहारा क्षेत्रमा आतं...
सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्दै, सवादेखि साढे १७ खर्बको बजेट आउने
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९–०८० को बजेट आज ल्याउँदैछ । हरेक वर्ष जेठ १५ गते संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । आइतबार अपरान्ह ४ बजे अर्थमन्त्री जनार्दन शर्म...
hamrakura.com . ३ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
पोखरा । पोखराबाट जोमसोङ जाँदै गरेको तारा एयरको विमान सम्पर्कविहीन भएको छ । १९ यात्रु लिएर उडेको विमान बिहान साढे १० बजेबाट सम्पर्कविहीन भएको बताइएको छ । प्रहरीका अनुसार घोडेपानी भन्ने स्थानबाट वि...
समुन्नत र समृद्ध मुलुकका रुपमा अघि बढाउनुपर्ने दायित्वलाई सबै मिलेर पूरा गर्नुपर्छ – प्रधानमन्त्री देउवा
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यसै वर्ष प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको चुनावसमेत सफलताका साथ सम्पन्न गरी मुलुकमा जनउत्तरदायी गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई थप सुदृढ गर्न सरकार प्रतिबद्ध ...
अमिक शेरचन भन्छन् – ‘संविधानको स्वीकार्यतालाई अझै फराकिलो र विश्वसनीय बनाऔँ’
मुख्यमन्त्री पोखरेल भन्छन् – सुशासन र समृद्धिका लागि सरकार प्रतिबद्ध
पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले सुशासन र समृद्धिका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । गणतन्त्र दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश व्यक्त गर्दै उनले युवाशक्तिलाई स्व...
hamrakura.com . ४ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
एकताबद्ध हुन प्रचण्डको अपील
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, विकास र सुदृढीकरणका लागि एकताबद्ध भई अघि बढ्न अपील गरेका छन् । गणतन्त्र दिवस–२०७९ का...
मैत्रिपूर्ण खेलमा नेपालको यू–२३ टोलीले टिमोर लिस्टेसँग खेल्यो बराबरी
काठमाडौं । एएफसी एसियन कप २०२३ छनोटको तयारीमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली शनिबार राति पहिलो मैत्रीपूर्ण खेलमा टिमोर लिस्टेको यु–२३ टोलीसँग २–२ को बराबरीमा रोकिएको छ । नेपाली टोली कुवेतमा हु...
चर्चमा खाना बाँडिरहेको स्थानमा भागदौड मच्चिदा कम्तीमा ३१ जनाको मृत्यु
काठमाडौं । दक्षिणी नाइजेरियामा शनिबार एउटा भीडभाडयुक्त चर्चको परोपकारी कार्यक्रममा खाना बाँडिरहेको बेला भागदौड मच्चिदा कम्तीमा ३१ जनाको मृत्यु भएको छ । दक्षिणी रिभर्स स्टेटको पोर्ट हार्कोर्ट शहरम...
च्याम्पियन्स लिगको उपाधि रियाल मड्रिडलाई, लिभरपुल निराश
काठमाडौं । स्पेनिश क्लब रियाल मड्रिडले च्याम्पियन्स लिगमा कीर्तिमानी १४औं उपाधि जितेको छ । शनिबार राति फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा भएको खेलमा चार वर्ष अघिको फाइनलमा निकालेको नतिजालाई दोहोर्याउँदै उपा...
तरुण दल अध्यक्ष गुरुङद्धारा गणतन्त्र दिवसको शुभकामना
काठमाडौं । नेपाल तरुण दलका अध्यक्ष विद्वान गुरुङले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गरेका छन् । उनले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै शुभकामना व्यक्त गरेका हुन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘लाखौँ ...
रुसबाट चीनमा कोइला आयात अप्रिलमा ४९ प्रतिशतले बढ्यो
मस्को। चीनमा रुसी धातुकर्म कोइलाको ढुवानी एक महिना अघिको तुलनामा अप्रिलमा लगभग ४९ प्रतिशतले बढेको स्पुतनिक कमोडिटी एनालिटिक्स फर्म केप्लरले जनाएको छ। छिमेकी युक्रेनमा जारी द्वन्द्वलाई लिएर युरोपे...
hamrakura.com . ५ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
पार्टीको निर्णय विपरीत जाने नौ जनालाई निकाल्यो सिराहा कांग्रेसले
सिराहा । नेपाली कांग्रेस सिराहाले पार्टीविरुद्ध उम्मेदवारी दिएका तीन जना र उम्मेदवारका प्रस्तावक र समर्थक छ गरी नौ जनालाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको छ। लहान नगरपालिकाको कार्...
कांग्रेसमा भोट दिएको भन्दै अहेबलाई बर्खास्त, जालो पृथ्वीसुब्बा गुरुङसम्म
बेसीशहर । लमजुङको मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाले नेपाली कांग्रेसलाई भोट दिएको भन्दै एक अहेबलाई बर्खास्त गरेको छ । मर्स्याङ्दी १, घनपोखरा स्वास्थ्य चौकीमा विगत दुई वर्षदेखि कार्यरत बिना गुरूङलाई गाउँपालिक...
पाँच स्मृति ग्रन्थ एकैसाथ लोकार्पण
काठमाडौं । राजधानीमा एकैपटक पाँच वटा स्मृति ग्रन्थको एकैसाथ लोकार्पण गरिएको छ । ज्ञानगुन साहित्य प्रतिष्ठान, ज्ञानगुन प्रकाशन, रुक्मणीराज शिवाकोटी स्मारक कोष र नेवरहुड स्कुलको संयुक्त आयोजनामा शनिब...
अहिलेसम्म संविधान जारी भएपछि १६१ ऐन निर्माण
काठमाडौं । नेपालको संविधान जारी भएपछि १६१ ऐन, ४४ अध्यादेश, २६३ नियमावली र ६२ वटा गठन आदेश जारी भएको छ । सरकारले शनिबार सार्वजनिक गरेको मन्त्रालयगत प्रगति विवरण–२०७९ मा सो विषय उल्लेख गरिएको छ । ने...
काठमाडौंमा झरी, बिहानैदेखि तीन प्रदेशमा वर्षा, कहाँ कस्तो प्रभाव ?
काठमाडौं । हाल नेपालमा स्थानीय, भारतको उत्तर प्रदेश, बिहार आसपास रहेको न्यून चापीय रेखा र पश्चिमी वायुको प्रभाव रहेको छ। बिहान बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिमका थोरै स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित ह...
प्रधानमन्त्री देउवाको गणतन्त्र दिवसको सन्देश – विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्ने हाम्रो साझा उद्देश्य
hamrakura.com . ६ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
यस्तो छ राष्ट्रपति भण्डारीको गणतन्त्र दिवसको शुभकामना सन्देश
मनाइँदै गणतन्त्र दिवस
काठमाडौं । आज जेठ १५ गते । राज्यको सम्पूर्ण शक्ति जनतामा निहित हुने गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था प्रारम्भ भएको दिन अर्थात् गणतन्त्र दिवस । निरङ्कुश एकात्मक राजतन्त्रको विधिवत...
आइतबार ४ बजे बजेट भाषण
काठमाडौँ। आइतबार दिउँसो ४ बजेट बजेट भाषण सुरु हुने भएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार सङ्घीय सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट भाषण गर्नेछन्। आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट संवैधानिक व्यवस्था ...
hamrakura.com . १५ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
काठमाडौँ। चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र ५.८४ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा यस्तो विस्तार ४.२५ प्रतिशत थियो । सरकारले आज संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २...
hamrakura.com . १६ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
राष्ट्रपतिले ८१८ कैदीको सजाय गरिन् माफी मिनाहा
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गणतन्त्र दिवसका–२०७९ का अवसरमा ८१८ कैदीको बाँकी कैद सजाय माफी मिनाहा गरेकी छिन् । राष्ट्रपति भण्डारीले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा...
hamrakura.com . १७ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
काठमाडौं । चीनमा पहिरोमा परी कम्तीमा आठ जनाको मृत्यु भएको छ । पहिरोका कारण मानिसहरू बसेको दुई ओटा घर भत्किएपछि त्यहाँ रहेका मानिसहरूको मृत्यु भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन् । देशको पूर्वी क्षेत्रमा...
hamrakura.com . १८ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
पूर्वपदाधिकारीलाई सेवा र सुरक्षा उपलब्ध गराउन कार्यदल बनाएकोप्रति आपत्ति
पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशका पूर्व पदाधिकारीहरुलाई सेवा र सुरक्षा उपलब्ध गराउन कानूनी मस्यौदा तयार गर्न कार्यदल गठन गरिएकोप्रति कास्कीमा क्रियाशील पाँच दलले आपत्ति जनाएका छन् । शनिबार वि...
पोरोशेन्कोलाई युक्रेन छोड्न रोक
काठमाडौं । युक्रेनका पूर्वराष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेन्कोले आफूलाई देश छोड्न रोक लगाइएको बताएका छन् । रुसले आक्रमण गरेदेखि नै सरकारले आन्तरिक राजनीतिक युद्धविराम तोडेको आरोप उनले लगाएका छन् । सन् २०१४...
चौध वर्षीया बालिका बलात्कृत, ४४ वर्षे तारा पक्राउ
ओखलढुंगा । ओखलढुंगामा १४ वर्षीया बालिका बलात्कृत भएकी छिन् । बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा ओखलढुंगाको मोलुङ गाउँपालिका ५ बस्ने ४४ वर्षीय तारानाथ पोखरेललाई शुक्रबार साँझ प्रहरीले पक्राउ गरे...
प्रदेश स्तरीय जिम्न्यास्टिक कास्कीका रोशन पुन र सीताले जिते
पोखरा । प्रथम गण्डकी प्रदेशस्तरीय जिम्न्यास्टिक प्रतियोगितामा कास्कीका रोशन पुन र सीता कुमारी खड्काले जितेका छन् । कास्की जिल्ला जिम्न्यास्टिक संघले पोखरामा आयोजना गरेको प्रतियोगितामा महिलातर्फ सी...
hamrakura.com . १९ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
निर्वाचनमा कुन दलका कति आए जनप्रतिनिधि ?
काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचन सकिएको छ । गत बैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणनाको अन्तिम परिणाम लगभग आइसकेको छ । बाजुराको बूढीगङ्गा नगरपालिकामा मतदान हुन बाँकी छ भने उदयपुरको त्रियुग...
deshsanchar.com . ३८ मिनेट अघि